Jaadka “caruur baan ka koriyaa waxaana sugayaa xilliga dib loo furo” 27 Abriil 2020 | Somalilandhorta
Browse: Home / Jaadka “caruur baan ka koriyaa waxaana sugayaa xilliga dib loo furo” 27 Abriil 2020
Jaadka “caruur baan ka koriyaa waxaana sugayaa xilliga dib loo furo” 27 Abriil 2020
Posted by Yasmin Ahmed on August 3, 2020 in Warar | 6 Views | Leave a response
27 Abriil 2020
Jaad lagu gubay SomalilandXIGASHADA SAWIRKA,SOCIAL MEDIA
Jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa jaad gaaraya 300kg ku gubtay meel fagaare ah, waxaana lala wareegay gawaaridii siday.
Tallaabadan waxay daba socotaa go’aan Somaliland ka soo baxay oo lagu mamnuucay jaadkii la geynayay dhammaan deegaannadaas, wuxuuna amarka dhaqangalay shalay oo Axad ahayd, wallow Gudoomiyaha Gobolka maroodi-Jeex uu sheegay inuu jirro jaad la soo geliyey Somaliland
Dowlada markii ay amarka soo saaraysay waxay sheegtay digniin ahayd in jaadkii la qabto la gubi doono.
Qaar ka mid ah ganacsatadii jaadka ayaa ku qanacsan yihiin tallaabada dowladda ay ku mamnuucay, sida Suleekho Cali ismaaciil, in kastoo saameyn ay ku yeelatay dhaqaalihii ay ku maareynayeen nolol maalmeedkooda.
Suleekho Cali Ismaaciil waa haweeneey ka ganacsata jaadka, waxayna BBC-da u sheegtay inay labaatan sano jaadka ka beecmushtaraysa. Ayna ku faraxsan tahay joojinta hadda la joojiyay maadaama danta caafimaadka ay ku jirto.
“Toddobo carruur ah ayaan ka koriyaa ganacsiga jaadka, waxaanan hadda sugayaa xilliga kale ee la fasaxo jaadka, guriga ayaanan hadda dhexfadhiyaa oo bilaa camal ayaan ahay”, ayay tiri Suleekho.
Maanta waxaan gubnay jaad gaaraya 300 oo kiilo, labo gaari oo jaadka wadayna ciidanka ayaa la wareegay. Dadkii jaadka waday maxkamada ayaa la horkeenayaa”
Jaamac Xaaji Axmed Cabdi
Gudoomiyaha Gobolka Maroodi-jeex
Sawiro baraha bulshada la soo geliyey ayaa muujinayay jaad meel fagaaro ah lagu gubay maata, jaadkan ayaa ahaa boqol marduuf oo nooca Dardarka loo yaqaano iyo 200 oo kiilo oo nooca Jabiska ah. Waxaa sidoo kale lala wareegay gaadiidka waday jaadkaas, dadkii wateyna waa la xiray.
Gudoomiyaha Gobolka Maroodi-jeex oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in ganacsatada waawayn ee jaadka ay qaateen amarka dowlada balse waxaa jira ayuu yiri “dad doonaya inay si qarsoodi ah kusoo geliyaan jaadka”.
“Maanta waxaan gubnay jaad gaaraya 300 oo kiilo, labo gaari oo jaadka wadeyna ciidanka ayaa la wareegay.”
Gudoomiyaha waxa uu BBC-da u sheegay in sharciga gawaarida ay kula wareegayaan ay marinayaan maxkamadaha iyo xeer-ilaalinta iyadoo laga duulayo amarada ay soo saareen Guddiga kahortagga faafitaanka cudurka Coronavirus.
Gudoomiyaha ayaa intaasi raaciyay in “cidkasta oo u hoggaansami weydo awaamiirta ay dowladu soo saartay ciqaab ayay la kulmaysaa ama hanti lala wareego ha ahaato ama xarig ha ahaatee, waayo waxaa la badbaadinayaa bulshada caafimaadkooda, jaadkuna xuduudo badan ayuu isaga gudbaa”.
Deegaanada Somaliland jaadka si weyn ayaa looga isticmaalaa wuxuuna ka soo galaa dhanka dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Awadaay loo yaqaano ee Gobolka Oromiya.
Noocyada jaadka ee Somaliland laga cuno
Jaadka la gbayXIGASHADA SAWIRKA,SOCIAL MEDIA
Jaadka itoobiya ka baxa ee Somaliland laga isticmaalo wuxuu kala leeyahay magacyo kala duwan, sida Daba-musmaar, Jebis, Dhadar iyo nooc Mijimo loo garanayo.
Qiimaha lagu kala iibsado Jaadka Jebiska loo yaqaan ee cunistiisa loo badnaa halkii kiilo oo afar rubuc u qaybsama waa $20 dollar, xalay oo kale waxa uu gaaray halkii kilo ee jabiska ah 50 dollar, sida uu ku soo warramay weriyaha BBC ee hargeysa.
Saamaynta Jaad la’aanta
kabarada jaadka ee Hargeysa
Hargeysa iyo meel kale oo dhulka Soomaalida ahba waxaa si weyn looga cunaa jaadka oo inta badan laga qaado wadamada Kenya iyo Itoobiya, joojintiisana waxay saamaynaysaa ganacsatada heerarkeeda kala duwan, sida kuwa beeraha jaadka kasoo iibsada iyo kuwa kasii gata ee sandaqadaha ku iibiya iyo waliba kuwa jaadka cuna oo qaar ka mid ah la qabsaday mirqaanka ama dareenka uu jeedku ku keeno dadka ruuga.